Sosokevitra avy amin’ny vondrom-piarahamonina ho an’ny birao · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 06 Jona 2020 5:52 GMT
Salama daholo! Voninahitra ho ahy ny hiasako indray ao amin'ny biraon'ny Global Voices, mandritra ny telo taona manaraka!
Misaotra ireo solontenan'ny filankevi-pitantanana teo aloha aho, Marianne Diaz sy Laura Vidal, noho ny fotoanany sy ny heriny nandritra ny fotoana nanompoany tao amin'ny birao, ary feno voninahitra aho hiara-hiasa miaraka amin'ireo namako Annie Zaman sy Arzu Geybulla ! Tsy asa mora ny ao amin'ny birao ary tsy «anaram-boninahitra» na loka ihany koa. Raha ny marina dia izany no handanianay solontenan'ny fikankevi-pitantanana fotoana ivelan'ny fiainanay mba hahafahanay maneho ny tombontsoan'ny GV tsara indrindra amin'ny maha fikambanam-piarahamonina azy.
Ny hanana birao matanjaka no fanantenako tamin'ny fotoana voalohany niasako sy ny amin'ity fotoana ity. Ahitana ampahany roa ny birao matanjaka raha ny hevitro. Ny fahafahan'ny mpikambana ao amin'ny birao amin'ny fandaniany ny fotoanany sy ny heriny amin'ny raharaha lehibe sy mifandraika amin'ny zava-dehibe no voalohany. Mba hahatonga izany fahalalaham-potoana izany hanan-danja lehibe araka izay azo atao no miditra ny ampahany faharoa, izay isika rehetra, vondrom-piarahamonina. Ny domberina avy aminareo dia midika fikambanana matanjaka kokoa, izay, iheverana, araka izay hazo atao ny otrika angovo rehetra [avy amintsika] ary hamahana ny olana rehetra.
Noho izany, mizara aminao ny taratasy hilazana ny sosokevitra avy amin'ny vondrom-piarahamonina aho, miangavy anao mba handefa izany aminay. Arovy ny tenanao ary antenaiko fa manan-javatra ho lazaina ianao !